China FK839 Automatic Bottom Production Line Labeling Machine ụlọ ọrụ na ndị na-ebu ya | Fineco
FK839 Automatic Bottom Production Line Labeling Machine nwere ike dakọtara na nzukọ akara iji kpọọ ngwaahịa ndị na-asọ asọ na elu elu na akụkụ ahụ gbagọrọ agbagọ iji ghọta akara ngosi na-enweghị ntanetị. Ọ bụrụ na ejikọtara ya na eriri na-ahụ maka nzuzo, ọ nwere ike ịkpọ ihe ndị na-asọ. Nkọwapụta zuru oke na-egosipụta njirimara dị mma nke ngwaahịa ma na-akwalite asọmpi. A na-eji ya na nkwakọ ngwaahịa, nri, ihe eji egwuri egwu, kemịkalụ kwa ụbọchị, eletrọniki, ọgwụ na ụlọ ọrụ ndị ọzọ.
Arụnyere n'okpuru nzukọ mgbakọ, ịkọ aha na ala ụgbọ elu na ebe obibi nke ihe ndị na-asọ asọ. Nhọrọ inkjet igwe na-ebufe iji bipụta ụbọchị mmepụta, nọmba ogbe, na ụbọchị mmebi tupu ma ọ bụ mgbe edechara.
FK839 Automatic Bottom Production Line Labeling Machine adabara maka ngwaahịa ndị chọrọ nnukwu mmepụta, yana akara ngosi ziri ezi nke ± 0.1mm, ọsọ ọsọ ọsọ na ịdị mma dị mma, ọ na-esikwa ike ịhụ njehie na anya gba ọtọ.
FK839 Automatic Bottom Production Line Labeling Machine na-ekpuchi mpaghara nke ihe dịka 0.44 cubic mita
arụ ọrụ ụkpụrụ: Ihe mmetụta ahụ na-achọpụta ngafe nke ngwaahịa ahụ ma zipụ mgbama na sistemụ njikwa akara. N'ebe kwesịrị ekwesị, usoro nchịkwa na-achịkwa moto iji zipụ akara na itinye ya na ọnọdụ akara nke ngwaahịa. Ngwaahịa gafere labeling ala, na a labeelu The attaching edinam na dechara.
Usoro nyocha ：
Ngwaahịa (jikọọ na mgbakọ mgbakọ) -> nnyefe ngwaahịa -> ule ngwaahịa -> akara.
Speed ​​elinggba ọsọ ọsọ (PC / min): Nzọụkwụ: 40～150pcs / min Servo: 50～200pcs / min (nke oke ngwaahịa na akara ya metụrụ)
Eter Ngari Ngwaahịa Kwesịrị Ekwesị: Ọ dịghị ihe achọrọ (Dabere na akara mgbakọ na-enye oke.)
Size Nke kwesịrị ekwesị labeelu size (mm): ogologo: 10mm～250mm; Obosara: 10mm～120mm
Arọ (n'arọ): ihe dị ka 70kg
◆ Ike (W): 300W
◆ Ngwaọrụ (mm) (L × W × H): banyere 750mm × 700mm × 850mm
Nke gara aga: Automatic L Type akara na Typecha Machine
Osote: FK-FX-30 Akpaaka oldkpuchi Igwe
FK308 Full Automatic L Type akara na Ada Ada ...
FK0001 Akpaaka Bottle Unscrambler
FK-FX-30 Akpaaka oldkpuchi Igwe
FK-TB-0001 Automatic Ada Ada Uwe Label Mac ...
HP-50 Akpaaka akuku akara igwe